Madaxweyneyaasha Kenya iyo Eithopia oo kala saxiixdey heshiis iskaashi oo amniga 2da dal u badan – idalenews.com
Hogaamiyaasha dalalka Ethiopia iyo Kenya Hailamariam Desalegn iyo Mwai Kibaki ayaa maanta magaalada Nairobi ku kala saxiixday heshiis ay ugu yeedheen Special status agreement.Labada hogaamiye ayaa hadalo ka jeediyay munaasbadii saxiixa heshiiska.
‘‘Waxaan ka wadahadalnay sidii aan si wadjair ah uga wada shaqayn lahayn arimaha nabadgelyada iyo xasiloonida khaasatan caqabadaha na horyaala sida argagixisada, budhcad badeeda, tarhiibka sharci darada iyo dambiyada qorshaysan,’’ ayuu yidhi Mwai Kibaki.
‘‘Waxaan hoosta ka xariiqnay inaan si wadajir ah ula dagaalano cid kasta iyo wax kasta oo khatar ku ah amniga gobolka,’’ ayuu mar kale yidhi Mwai Kibaki.
Dhanka kale Raysulwasaare Hailemariam Desalegn oo isna goobta ka hadlay ayaa sheegay in Kenya iyo Ethiopia uu ka dhaxeeyo xidhiidh khaas ah.
Dalalka IGAD waxaa ka dhaxeeya xidhiidh wanaagsan oo khaas ah, Kenya iyo Ethiopia waxay dalalka IGAD u horseedi karaan inay gacmaha isqabsadaanhogaamin karaan dalalka IGAD si nabadgaliyo iyo xasilooni loogu soo dabaalo gobolkan oo aad kuligiin la socotaan inuu yahay gobol dhib badan,haseyeeshee waxaa hada muuqata in dhibaatooyinkaas laga baxayo oo Somalia hada ay si wadajir ah u xasiliyeen Ethiopia, Kenya iyo walaalaheena kale ee xubnaha ka ah IGAD.
Hoos ka daawo munaasabadii saxiix heshiiska labada dal iyo khudbadihii ay kala jeediyeen labada hogaamiye